Monkey Forest any Ubud, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Sarintany Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Ubud Monkey Forest
Ala Monkey Bali ao amin'ny Village Padangtegal, Ubud
Ny topy ala momba ny ala mikitroka any Ubud, ny vohitra Padangtegal
Izy io dia tahiry voajanahary, izay hita ao amin'ny tanànan'i Padangtegal akaikin'i Ubud. Ny anarana feno dia Mandala Suci Wenara Wana.
Macaque 700 eo ho eo no monina eto amin'ny toe-javatra voajanahary. Ny ala gidro ao Ubud (ao amin'ny faritry ny tanànan'i Padangtegal) dia manana fotodrafitrasa fizahan-tany mandroso. Manana:
teboka fanampiana ara-pitsaboana;
paositry ny polisy;
Sarintany ala rajako
Sarintany Ala Monkey Ubud
Eo afovoan'ny ala dia misy kianja malalaka misy loharano. Amin'izany dia azonao atao ny mamahana ny gidro ary mandinika azy ireo akaiky. Indraindray koa ny mpiasan'ny valan-javaboary dia mamelona biby eo an-toerana. Indrindra ho an'ity tanjona ity dia misy tranom-borona mitazona ovy mamy (tubers mitovy amin'ny ovy).
Somary lavidavitra kokoa, manomboka ny arabe, amin'ny lafiny roa dia misy sary sokitra vato elefanta, gidro, ary koa dragona sy endri-tsoratra mahafinaritra hafa.
Ny sasany amin'ireo sary sokitra ireo dia noforonina tamin'ny andro taloha, fa ny sasany dia tena vitsy taona. Na izany aza, ny teo aloha tsy azo avahana amin'ny farany amin'ny maso mitanjaka. Samy rakotry moss ny roa. Ireo sary sokitra ireo dia natao hanohanana ny herin'ny maizina ao anaty ala.
Mialoha ny alan'ny rajako, izay miandry anao any, dia azonao atao ny mahita ao amin'ny bokikely elektronika amin'ny PDF - Brochure orientation électronique. MonkeyForestUbud
Ny fitondran-gidro any an'ala
Ny gidro eo an-toerana dia tsy matahotra olona mihitsy. Mahatsapa izy ireo fa tompon'ny faritany. Eo am-pitadiavana sakafo dia matetika ny gidro no mijery ao anaty kitapo sy paosin'ireo mpitsidika ny ala. Ny miavona indrindra aza dia misambotra akondro avy hatrany am-pelatanany. Ankoatr'izay, saika tsy azo atao ny mitazona akondro, na dia mitazona azy amin'ny tànana atsangana ambonin'ny lohanao aza, satria ny macaque dia be dia be: ny lanjan'ny vehivavy dia mahatratra 5,7 kg, lahy - hatramin'ny 8 kg.
Ny Monkey Forest any Padangtegal dia misokatra ho an'ny besinimaro isan'andro manomboka amin'ny 8 ora sy sasany hatramin'ny 30 ora. 18 50 ropia ny fidirana ho an'ny olon-dehibe, ho an'ny zaza iray - 000.
Ny Ala Monkey Ubud dia ao amin'ny tanànan'ny Padangtegal, mifanila mivantana amin'i Ubud amin'ny lafiny atsimo.
Raha mipetraka any Ubud ianao dia tsy azo atao ny mandingana an'io ala io raha tsy tsikaritrao. Be dia be ny rajako mihodinkodina amin'ny arabe, ary ny lalana mihitsy dia manintona be ary mandalo.
Ala gidro any akaikin'i Ubud. Fijery zanabolana
adiresy: Jl. Monkey Forest, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonesia
mandrindra: -8.518995, 115.258065
Tranokala ala Ubud Monkey: zerobase.review
Alika rajako any Ubud amin'ny sari-tanin'i Bali
Alika rajako any Ubud amin'ny sari-tany
Tapakila fidirana ho an'ny olon-dehibe - 50 000 ropia
Tapakila fidirana ho an'ny ankizy - 40 000 ropia
Alatsinainy - 8.30 - 18.00
Fa izao ny ala gidro dia nakatona ho an'ny besinimaro. Mandritra ny vanim-potoana mandra-pahatongan'ny Bali dia tsy hanokatra sisin-tany malalaka ho an'ny fizahan-tany.
Ny rajako mahatsapa fa ao an-trano ... satria ity no tranon'izy ireo
Tempoly ao anaty ala gidro
Be olona foana eto
Mamahana ny gidro
Ahoana ny fomba fitondran-tena any amin'ny ala gidro
Zavaboary mahafinaritra. Mazoto, mazava ho azy, fa etsy ankilany, isika mpizahatany-olona dia nanimba azy ireo ary nampianatra azy ireo hanao izany, ho an'ny sary mampihomehy.